Saturday March 28, 2020 - 07:21:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
sawir hore gaari taaw ah oo Muqdisho lagu qarxiyay
Qaraxa koowaad wuxuu haleelay gaari Booyad ah oo qeyb ka ahaa koloyada kaas oo gabi ahaanba burburay sida ay inoo xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah.
Sidoo kale qaraxa labaad ayaa waxaa isna lagu burburiyay gaari Xamuul ah halkaasna waxaa ciidamada shisheeye ku gaaray khasaare kala duwan oo naf iyo maalba leh.
Ugu yaraan 7 askari ayaa uga geeriyootay qaraxyada halka ay uga dhaawacmeen tiro kale. Mas'uuliyadda weeraradan waxaa sheegatay Xarakada Al-Shabaab.
Ciidamada shisheeye ayaa muddo ku sugnaa wadada qaraxyada lagula beegsaday iyagoo ku mashquulsanaa daabulidda meydadka iyo dhaawacyada, Askarta AMISOM ee deggan Xalane waxaa aad ugu adag in ay sahayda gaarsiiyaan saaxiibadooda ku sugan xerada Maslax ee Suuqa Xoolaha.